ပါဘက်မုန်တိုင်း ကော့သောင်းမြို့အနီးမှ ဖြတ်သန်း တိုက်ခတ်နိုင်သည့်အတွက် ကော့သောင်းမြို့နေ ? - Yangon Media Group
ပါဘက်မုန်တိုင်း ကော့သောင်းမြို့အနီးမှ ဖြတ်သန်း တိုက်ခတ်နိုင်သည့်အတွက် ကော့သောင်းမြို့နေ ?
ကော့သောင်း၊ ဇန်နဝါရီ ၄
တောင်တရုတ်ပင်လယ်၊ ဗီယက်နမ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်၌ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသော အပူပိုင်းမုန်တိုင်း PABUK သည် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ကော့သောင်းမြို့အနီးမှ ဖြတ်သန်းတိုက်ခတ်နိုင်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံတကာမိုးလေဝသဌာနမှ ခန့်မှန်းခဲ့မှုများကြောင့် ဇန်နဝါရီ ၃ ရက် ညနေပိုင်းမှစတင်၍ ကော့ သောင်းမြို့နေပြည်သူများ သတိပြု နေထိုင်ကြရန် အသိပေးနှိုးဆော် မှုများဆောင်ရွက်ပေးနေကြောင်း သိရသည်။ အသိပေးနှိုးဆော်မှုများဆောင်ရွက်ရာတွင် ကော့သောင်းခရိုင်နှင့် မြို့နယ်သဘာဝဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီမှ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန၊ မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ မီးသတ်ဦးစီးဌာနနှင့် ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံ ရေးဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်း၍ မြို့ နေပြည်သူများ သတိပြုနေထိုင် ကြရေး အသိပေးနှိုးဆော်ပေးနေ ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါမုန်တိုင်းအခြေအနေသည် ဇန်နဝါရီ ၄ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၅ နာရီခွဲတိုင်းထွာချက်များအရ ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့ သို့ရောက်ရှိလာပြီး ထိုင်းနိုင်ငံနခွန်စီသမာရက်မြို့ အရှေ့တောင်ဘက် (၁၂၅) မိုင်ခန့်၊ မြန်မာနိုင်ငံကော့ သောင်းမြို့၏ အရှေ့တောင်ဘက် မိုင် (၂၄ဝ)ခန့်အကွာ ပင်လယ် ပြင်ကိုဗဟိုပြုနေကြောင်း၊ ယင်းမုန်တိုင်းသည် အနောက်-အနောက် မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့ လျားပြီး ကုန်းတွင်းပိုင်းသို့ မြန်မာနိုင်ငံ ကော့သောင်းမြို့၏တောင်ဘက် ရှိထိုင်းနိုင်ငံနခွန်စီသမာရက်မြို့ အနီးမှ ညနေပိုင်းတွင် ဖြတ်ကျော် ဝင်ရောက်ပြီး ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင် သို့ရောက်ရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း မိုး လေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ အသိပေးထားသည်။
မြို့ပေါ်နေပြည်သူများသတိ ပြုနေထိုင်ကြရေး အသိပေးနှိုး ဆော်ပေးနေမှုအပြင်၊ ပင်လယ်ကျွန်းအပန်းဖြေခရီးထွက်ခွာမည့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများရပ်နားထား ရေး၊ ပင်လယ်ပြင်ရေလုပ်သားများ လုပ်ငန်းခွင်သို့ မထွက်ခွာရေး၊ ငါးဖမ်းလှေများဘေးကင်းလုံခြုံရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းထားရေး၊ သက်ဆိုင်ရာမိုးလေဝသဌာနများမှ ထုတ်ပြန်သည့် သတင်းအချက်အလက်များအား သတိပြုနားထောင်ရေး၊ ကောလာဟလသတင်းများအား မယုံကြည်ရေးတို့အတွက် တာဝန်ရှိအဖွဲ့အစည်းများက လိုက်လံနှိုး ဆော်အသိပေးနေသည့်အပြင် အသိပညာပေးလက်ကမ်းစာစောင်များအား ရေဆိပ်၊ လှေဆိပ်များနှင့် အများပြည်သူဝင်ထွက်သွားလာမှုများပြားသည့်နေရာများ၌ လိုက် လံဝေငှပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရ သည်။
မန္တလေး ပြည်ကြီးတံခွန် မြို့မရဲစခန်း၌ မူးယစ် ဆူပူမှုဖြင့် ခေတ္တထိန်းသိမ်း ခံထားရသူတစ်ဦး သေဆ??
ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အရပ်သားပြည်သူ ၁ဝဝ ဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေး စာရွက်များ ဖြန့်ဝေခြ?
ပေါင်မြို့နယ်တွင် လေပြင်း တိုက်ခတ်မှုကြောင့် နေအိမ်များ ပြိုကျ ပျက်စီးမှုဖြစ်ပွား
မန္တလေးမြို့တွင် ဘေးအန္တရာယ်ရှိ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ ဆွေးနွေး
Instagram ပေါ်၌ R-Word အား အသုံးပြုခဲ့မှုအပေါ် Khloe Kardashian တောင်းပန်
စစ်ဘေးကြောင့် ရှောင်တိမ်းနေကြရသည့် အမျိုးသမီးများအတွက် ဆုတောင်းပွဲ မကွေးမြို့၌ကျင်းပ
ဂူဟေဆွန်းနဲ့ ကွာရှင်းမှုသတင်းကြောင့် အန်ဂျေယောင်းပါဝင်မယ့် MBC ဒရာမာအပေါ်ထိခိုက်မှုရှိနိုင်သလား